Oppo unelogo entsha ejongeka ilula kakhulu | I-Androidsis
Oppo kubonakala ngathi uxakekile kutshanje, usebenza kuyo uthotho olulandelayo OPPO Reno nge Itekhnoloji ye-10X yokusondeza. Inkampani ityhile uthotho kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, kodwa, kunye nokutyhilwa, kubonakala ngathi yenziwe Olunye utshintsho kwi logo yakho.
Ngelixa singaqinisekanga ukuba utshintsho lwe logo luqale nini ukusebenza, iwebhusayithi esemthethweni ye-OPPO e-China iyayibonisa ngenkangeleko eyahlukileyo eyahlukileyo ngokuthelekiswa noko besele siqhelile. Kubonakala ngathi itshintshile ifonti yeleta efanayo.
I-logo entsha ye-Oppo ilula kakhulu kwaye iyahambelana ngakumbi kuyilo. Unobumba ngamnye unobunzima obulinganayo, ngokungafaniyo naleyo yangaphambili. Uyilo sele luvotile kaliqela, ikakhulu ngenxa yokuba inembonakalo yanamhlanje, nangona ine "frills" ezimbalwa okuthethileyo. Nangona kunjalo, ayimi ngaphandle njengoyilo lwangaphambili, kuba ayisebenzi kangako.
I-logo ye-Oppo endala (phezulu) kunye nelogo entsha (ezantsi)
Okwangoku, I-logo entsha yenkampani ibonakala kuphela kwiwebhusayithi yayo yaseTshayina esemthethweni. Zonke ezinye iiwebhusayithi zommandla, ezinje nge-Oppo India okanye i-Oppo Global, zisasebenzisa i-logo endala. Ke ngoko, asiqinisekanga ukuba inkampani ijonge ukunciphisa ukusetyenziswa kwayo e-China okanye ukuba iyakuyihlaziya kwilizwe jikelele. Ngapha koko, sinethemba lokuva okungakumbi malunga noku kungekudala.
Kwelinye icala, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba olu tshintsho lutsha lunokuba luphawu oluchaza a inqanaba elitsha lophawu, ke sinethemba lokuba iya kuhamba kunye nezinye izibhengezo ezintsha eziza kutyhilwa kunye neendaba ezininzi ezinomdla kunye nokwaziswa okuzayo kwee-smartphones kunye nobunye ubuchwephesha.
Masingayilibali loo nto U-Oppo unikezelwe nakwezinye iinkalo zentengiso, Ukongeza kwii-mobiles. Oku kuphakamisa ukuba uceba ukuphinda achaze iindlela ezithile zokuthengisa ukuze amnike ubunzima kulo nyaka, ogqiba nje ikota yokuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Oppo iyila kwakhona i-logo yayo: inokuba sisiqalo senqanaba elitsha lenkampani